Google sy Italia dia hitondra tranomboky Italiana manan-danja amin'ny Internet | Avy amin'ny Linux
Ny motera fikarohana lehibe indrindra amin'ny Internet, Google, dia miray hery amin'ny Governemantan'i Italia ary manao sonia fifanarahana izy ireo hanombohana ny fizotry ny fanaovana nomerika an'ireo boky an-tapitrisany izay tsy iharan'ny zon'ny mpamorona izay ao amin'ny tranombokim-pirenena any Roma sy Florence. Ity no fotoana voalohany ahazoan'ny tsirairay amin'ny faritra rehetra an'izao tontolo izao miditra amin'ny Internet ary manadihady amin'ny sanganasa nomerika ataon'ny mpanoratra toa an'i Dante Alighieri na Francesco Petrarca.
Ity serivisy ity dia azo atao amin'ny alàlan'ny fitaovana "Google Books", izay ahafahana "manolotra anjara biriky lehibe amin'ny fitehirizana sy ny fanaparitahana ireo sanganasa manan-danja amin'ny lova kolontsaina italianina", araka ny voalaza tao amin'ny fifanarahana voalaza, izay mamaritra fa ny fanoratana nomerika iray tapitrisa eo ho eo no hatao ao anatin'ny roa taona. Hizaran'ny Google ny vidin'ny fanaovana nomerika rehetra, ankoatry ny fanomezana ny fanamorana ny dika mitovy amin'ireo tranombokim-pirenena hafa any Roma sy i Florence.
Stefano Maruzzi, talen'ny Google Italia dia nilaza tamin'ny fanambarana iray fa: "Ity tetik'asa ity dia maneho ny maha-zava-dehibe ny fananan'i Italia sy ny kolontsaina italiana ho an'i Google, izay faly afaka nanolotra ny anjara birikiny manokana hanaparitahana ny lova ara-kolontsain'ny firenentsika manerantany."
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Google sy Italia dia hitondra tranomboky italiana manan-danja amin'ny internet